गृह र भौतिक मन्त्रीबीच विवाद !
काठमाडौं ४ असार । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही प्रक्रिया बढाएका बेला भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ त्यसको प्रतिवादमा उत्रिएका छन् । मन्त्री महासेठले आईतबार निर्माण व्यवसायीसमक्ष कुनै पनि व्यवसायीलाई पक्राउ...
प्रदेश ३ का मुख्य शहरमा पेट्रोल गाडी बन्द !
काठमाडौं ३ असार । आगामी दश वर्ष भित्र प्रदेशका मुख्य शहरहरुमा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी बन्द गरिने भएको छ । २०८५ सम्म प्रदेशका मुख्य शहर पेट्रोलियम सवारी साधन मुक्त बनाउँदै विद्युतबाट सञ्चालन हुने सवारी सञ्चालन...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले ल्याएको बजेटका बारेमा जथाभावी अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष ओलीले सरकारी ढुकुटी बलियो नभएको अवस्थामा बजेट ल्याइएकाले त्यस मर्मलाई बुझेर प्रस्तुत हुन...
नेकपाका नेता डा। राजन भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमण मुलुकको समृद्धिका लागि कोशेढुंगा सावित हुने दाबी गरेका छन् । ओली ५ गते चीन जाने छन् । भ्रमणका क्रममापारवाहन तथा यातायात सम्झौतालाई कार्यान्वयन...
भाँचिएको दायाँ हात, बायाँमा गरियो प्लास्टर
काठमाडौं २ असार । जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा डाक्टरको चरम लापरबाही देखिएको छ । एक बालिकाको दायाँ हात प्लास्टर गर्नुपर्नेमा बायाँ हात प्लास्टर गरिएको छ । साबिक राम्नाकोट ४ हाल पचालझरना गाउँपालिका वडा नम्बर ५...
काठमाडौं २ असार । सरकारमा सहभागिताबारे राष्ट्रिय जनता पार्टीमा विवाद देखिएको छ । सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै राजपा नेताहरूमा तीन धार देखिएको हो । एउटा पक्ष सरकारमा जाने र अर्को पक्ष जान नहुने पक्षमा छन् । तेस्रो पक्ष...
के गर्द छ कोइराला परिवार ?
काठमाडौं २ असार । तिपक्षी दल कांग्रेसभित्र पार्टी बलशाली बनाउने बहस चलिरहँदा कोइराला परिवारका सदस्यको रणनीति र सक्रियताबारे सबैको चासो देखिन थालेको छ । पछिल्लो महाधिवेशनदेखि शीर्ष नेतृत्वको घेराबाट बाहिरिएको ‘कोइराला परिवार’ यति बेला...
काठमाडौं २ असार । जाजरकोटमा बालविवाह हुने क्रम रोकिएको छैन । महिला तथा बालबालिका कार्यालय जाजरकोटका अनुसार १९ वर्ष नपुग्दै जाजरकोटमा ७४ प्रतिशतको विवाह हुने गरेको छ। महिला तथा बालबालिका कार्यालय जाजरकोटका अनुसार १९ वर्ष...
काठमाडौं २ असार । काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा घरेलु श्रमिक भएर काम गरिरहेका बाजुराको गौमुल गाउँपालिकाका बालबालिका घर फर्किन थालेका छन् । गौमुलका स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यस्ता बालबालिकालाई फर्काउन सुरु गरेका हुन् । अहिलेसम्म १९ बालबालिका...
काठमाडौं २ असार । राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहको माध्यमबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले दस्तखत गरेर जनमत संग्रहसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था...